Iyo beta 4 yeWOSOS 3.1.1 yatove mumaoko evanogadzira | Ndinobva mac
WatchOS 4 beta 3.1.1 ikozvino iri mumaoko evanogadzira
Nezuro chete iyo beta vhezheni ye macOS Sierra, iOS uye watchOS vagadziri yakatangwa. Ino nguva tichaenda kunoona nhau kuti Apple inowedzera mune beta vhezheni yekambani smartwatch yakatosvika vhezheni yechina uye inoda kuti beta vhezheni yeIOS ishande zvakakwana.
Iyi beta nyowani inoenderera nekuvandudza kugadzikana kwesystem uye kuita. Chokwadi ndechekuti neWatchOS 3, Apple wachi dzakatora hupenyu hutsva Uye isu tinogona kutaura kuti kana iwe uri mumwe wevaya vane chizvarwa chekutanga Apple Watch kana Series 0, zvinokurudzirwa kuti uenderere pamwe nezvinozoitika nekuti iko kugadzirisa kunonakidza.
Kugadziridzwa mune izvi watchOS 3.1.1 yechina beta Ivo vanoteera mutsara wedzimwe dzesarudzo dzakaburitswa nevakomana kubva kuCupertino uye inotarisisa zvakanyanya pane kuita uye mashandiro echishandiso. Iko hakuna kwakakosha shanduko dzinomira kubva kune zvimwe zvekuvandudza zvine chekuita nekugadzikana kwesisitimu.
Zvinotarisirwa kuti mwedzi uno unouya Apple ichagadzirisa shanduro idzva uye kuvhura zviri pamutemo idzi shanduro dzeOS kune vese vashandisi. Panyaya yeApple Watch, yeuka kuti iyo iPhone yekuvandudza inodikanwa kuti iyo ibatanidze pasina dambudziko. Yambira zvakare kuti tiri kutarisana nemhando dzebeta uye idzi shanduro dzinogona kukonzera matambudziko mukushanda chaiko kwemaapplication atinoshandisa mazuva ese, saka kana usiri mugadziri zvakanakisa kugara padivi kusvikira vhezheni yepamutemo yaburitswa, iyo icha kwete kutora yakarebesa kana kunyangwe vhezheni yevashandisi vari mukati meveruzhinji beta chirongwa, izvo zvinotora nguva shoma kuvhura.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » WatchOS 4 beta 3.1.1 ikozvino iri mumaoko evanogadzira
Australia inoramba chibvumirano chakabatana pakati pemabhangi neApple Pay
Apple ichagadzirisa runyorwa rwevashoma maMac mwedzi unouya